Ixesha leGiologic Scale Ukubonisa onke ama-Eons, ii-Eras kunye nexesha lexesha
Ukujonga kwiSithombe esikhulu
Esi sikali sesikhathi sendawo sikhombisa kwaye sinikeza imihla yazo zonke iimbonsi ezichaziweyo, ii-eras namaxesha e- ICS International Chronostratigraphic Chart . Akubandakanyi amaxesha kunye nobudala. Iinkcukacha ezongezelelweyo zexesha zinikwe i-Cenozoic Era, kodwa ngaphaya koko kukho incinane encinci yokungaqiniseki kwimini echanekileyo. Umzekelo, nangona umhla odweliswe ekuqaleni kwexesha lase-Ordovician liyi-485 yezigidi zeminyaka edlulileyo, ngokwenene 485.4 ngokungaqiniseki (±) wee-1.9 yezigidi zeminyaka.
Xa kunokwenzeka, ndidibanise ne-geology okanye i-paleontology nqaku ukuze uthole ulwazi oluninzi. Iinkcukacha ezingaphezulu kwetafile.
Eon Era Ikhefu Amaxesha (Ma)
IPhanerozoic Cenozoic Quaternary 2.58-0
Paleoproterozoic BaseStatheriya 1800-1600
(c) ngo-2013 u-Andrew Alden, onikwe ilayisenisi ku-About.com, Inc. (umgaqo-nkqubo wokusetyenziswa ngokufanelekileyo). Idata esuka kwiGeologic Time Scale ka-2015 .
Buyela kwinqanaba lexesha le-geologic level
Amaxesha e-Eon Phanerozoic aphinde ahlukane kwii-epochs; ubone abo base-Phanerozoic Eon geologic time scale. Iimpoko zisahlukana ngokubanzi; ubone abo base- Paalezoic Era , i- Mesozoic Era kunye ne- Cenozoic Era geological time scales.
I-Proterozoic kunye ne-Aronan Eons, kunye nekhefu "elingaqhelekanga" i-Hadean Eon, lihlanganisane libizwa ngokuba lixesha le-Precambrian.
Ewe, le miyunithi ayilingani ubude. Eons, ii-eras kunye namaxesha adla ngokuhlukana nesiganeko esikhulu se-geologic kwaye zizodwa kwiimeko zemozulu, ukuma komhlaba kunye neentlobo zezinto eziphilayo. I-Cenozoic Era, umzekelo, iyaziwa ngokuba yi "Age of Mammals." Ngakolunye uhlangothi, i-Carboniferous Period, ibizwa ngokuba ngamabhedi amakhulu amalahle awakhiwa ngeli xesha ("iCarboniferous" ithetha ukuzala kwamalahle). Njengoko usenokuba uqaphele egameni layo, i-Period yeCriyogeni yayilixesha lokuqhayisa okukhulu.
Imihla eboniswe kule nqanaba yexesha le-geologic ichazwe yiKomishoni yamazwe ngamazwe kwi-Stratigraphy ngo-2015. Imibala ichazwe yiKomiti yeMephu ye-Geological Map of World ngo-2009.
I-PS - Konke kuzo zonke, kukho ii-eons ezine, ii-eras ezili-10 kunye namaxesha angama-22. Iingonyana ziyakwazi ukukhunjulwa ngokukhawuleza ngamanemonics - safundiswa "Nceda uPhephe i-Ham" yePhanerozoic, iProterozoic, isiArchean neHadean. Ukuba awukhupheli i-Precambrian, i-eras kunye namaxesha angakhunjulwa ngokulula. Khangela apha ngamacebiso ambalwa.
Ingaba Inzululwazi Ingabonakalisa Nantoni na?
IiNyanga ezipheleleyo zeNyanga kunye neentsingiselo zazo
20 I-Awkwardly Hilarious Album Covers
Iinyanga zibonakalisa uthando oluhambelanayo
Izithuba kwiSouth Field Field
Isikhokelo sokuSebenza ngokuSebenza ngokuThengisa ngokufanelekileyo
"Indlu yeDololi" Isifundo soBuntu: uNils Krogstad
I-Mercury eLeo (kwiKhadi lokuzalwa)
I-Etiquette kwi-Broadway Show
I-Space Chimps kunye neMbali yabo kwindawo